I-Dawn entsha yabaphenyi base-Afrika njengoba i-TCC Africa ne-AfricArXiv Imemezela Ukusebenzisana Okuhlelekile - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu I-AfricArXiv on I-XNUMI-Okthoba i-22 I-XNUMI-Okthoba i-22
The Isikhungo Sokuqeqesha Ezokuxhumana (TCC Africa), ezinze eNyuvesi yaseNairobi, eKenya, kanye ne-pan-African Open Access portal I-AfricArXiv ngalokhu simemezela isivumelwano sethu esisemthethweni sokusebenzisana ngenhloso yokwakha indlela yesikhathi eside yamasu nokusimamisa ekwakheni nasekuphatheni umphakathi wezazi zomhlaba wonke ozothuthukisa ukubonakala kocwaningo lwase-Afrika.
Ubambiswano lwe-TCC Africa - AfricArXiv luzothuthukisa amakhono kanye nobungoti bezinhlangano zombili ukukhulisa isayensi evulekile, ukufinyelela okuvulekile, amakhono okuxhumana ocwaningo nokwakhiwa kwamakhono phakathi kososayensi nabanye ababambiqhaza bezazi ezwenikazi lase-Afrika nasemhlabeni jikelele.
Ukukhuthaza umfundaze wase-Afrika wokutholakala komhlaba wonke
Ukuqamba amasu okusimama azungeze umfundaze wase-Afrika kanye nezinsizakalo zezifundiswa
Ukwakha i-ecosystem yezwekazi labahlanganyeli abafundile
I-TCC Africa izobe ihlinzeka i-AfricArXiv ngohlaka lwezomthetho futhi isebenze njengomphathi wezimali ukwenza lula ukusebenza kwe-AfricArXiv, ukusimama nokukhula kwamasu ngaphakathi kwe-Afrika. Ngaphezu kwalokho, i-TCC Africa izoba ngumlingani wokwakha amakhono, inikeze ukuqeqeshwa nokwesekwa kwabaphenyi base-Afrika kanye nezikhungo zokuthi bangayisebenzisa kanjani ngempumelelo ingosi nezinsizakalo ze-AfricArXiv.
“Lokhu kubambisana kumayelana nokwakha ukwethembana kubaphenyi nasezikhungweni zase-Afrika ngokwakha inkundla yokushicilela enokwethenjelwa nokuzimela abangayisebenzisa ukusabalalisa ukubonakala komhlaba wonke nokutholakala kwemiphumela yocwaningo lwabo. Sifuna ukusungula i-AfricArxiv njengengxenye ebalulekile yokuhamba komsebenzi wokushicilela kwezazi wase-Afrika. Ukufeza lokhu, sisebenza ngokubambisana, ”
kusho uNkk UJoy Owango, Umqondisi Omkhulu we-TCC Africa.
“Kusukela sethulwa ngoJuni 2018, semukele futhi samukela imibhalo yesandla yocwaningo engaphezu kwengu-500, amasethi edatha, ama-slide slides kanye nezinye izinhlobo zemiphumela yezifundiswa ezivela kwizifundiswa ezisemazweni angama-23 ase-Afrika. Kuze kube manje, bekuluhambo oluthokozisayo olunamajika okufunda ajulile kuwo wonke amalungu ethimba lethu futhi sizilungiselela ukusebenzisa izinsiza zethu ngalokhu kubambisana, ”
uthi UDkt Jo Havemann, Umsunguli we-AfricArXiv noMqondisi Omkhulu. UJohanssen Obanda, Umphathi Wezokuxhumana we-AfricArXiv, uyanezela:
“I-TCC Africa ingumsekeli oqinile nommeli womsebenzi wethu. Silangazelele kakhulu ukusebenzela abacwaningi nezikhungo zocwaningo ezwenikazi lonke ngemizamo ehlanganyelwe kusukela manje kuqhubeke. ”
Isungulwe njengenhlangano engenzi nzuzo e2006 futhi ibhaliswe eKenya, i-Training Center in Communication (TCC Africa), iyi-Trust ezuza umklomelo futhi iyisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono wokuxhumana asebenzayo kososayensi. Njengengxenye yegunya lalo elingumgogodla, i-TCC Africa inikeza ukwesekwa namandla okwenza ngcono umphumela wokucwaninga nokubonakala ngokuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezazi nezesayensi.
Hashtags: #SciComm # TCCat15
Kusukela ngo-2018, i-AfricArXiv ingobo yomlando ekhokhelwa ngumphakathi yocwaningo lwase-Afrika. I-AfricArXiv ibambisene nezinsizakalo ezisungulwe zokugcina izifundiswa ukuhlinzeka ngamapulatifomu ososayensi base-Afrika ukuxhumana nabanye abacwaningi ezwenikazi lase-Afrika kanye nokwethula imiphumela yabo yocwaningo.
Categories:	izimemezeloUkubambisanaVula UkufinyelelaVula iSayensi
Tags: Ukutholakala kocwaningo lwase-Afrikaukufinyelela okuvulekilevula isayensiCindezelaI-TCC Africa
Inkundla Yase-Afrika Yocwaningo Lwe-Afrika | Isivinini se-CCC Sokuqukethwe kwePodcast	· 14 Novemba 2021 ngo-5:01 pm
[…] Ezinze eNyuvesi yaseNairobi, eKenya, kanye nengosi ye-pan-African Open Access i-AfricArXiv ivumile ukugqugquzela indlela yesikhathi eside yamasu neqhubekayo yokwakha nokuphatha amazwe ngamazwe […]